Ictiraaf Adigaa Lagu Siiyaa, Awood Adigaa Qaaday | Martech Zone
Ictiraaf Adigaa Lagu Siiyaa, Awood Adigaa Qaadanaya
Toddobaadkan, waxaan la yeeshay sheeko la yaab leh wiil dhallinyaro ah oo aannu wada shaqeyn jirnay oo ka tirsan warshadaha suuqgeynta. Qofku wuu jahwareersanaa. Waxay khabiir ku ahaayeen waxsoosaarka sanado badan oo natiijooyin aan caadi aheyn. Si kastaba ha noqotee, badiyaa waa la iska indhatiray markay tahay fursadaha hadalka, talo bixinta, ama fiirsashada madaxda.
40 jir, kan xujo ayaa wax badan ka dambeeyay qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha la aqoonsan yahay ee suuqgeynta suuqgeynta. Sababtuna waa mid fudud - Waxaan ahaa shaqaale hawlkar ah, wax soo saar leh oo u suurtageliyay hoggaamiyeyaasha ganacsiyada aan ka caawiyay helitaanka maamulka. Waxaan horumariyey warbixinnada warshadaha oo ka dhigay buugaag iyo bandhigyo muhiim ah oo magacooda ku qornaa. Waxaan bilaabay ganacsiyo aanan lagu magacaabin aasaasihii. Waxaan daawaday sida dadka aan u waramay ay u dalacayaan oo ay mushahar fiican uqaataan, inta aan dabada ka shaqaynayay iyaga. Qaar badan oo iyaga ka mid ahi waa kuwo qani ah.
Ma eedeynayo iyaga. Waan ku faraxsanahay wixii aan ka bartay daawashadooda. Xaqiiqdii, waxaan saaxiibo fiican la ahay qaar badan oo iyaga ka mid ah maanta. Laakiin intii aan shaqeynayay, waxaan sugayay inaan noqdo loo aqoonsan yahay maamul. Casharka ugu dambeeya ee aan aakhirkii bartay kadib markaan daawaday waxay ahayd inay noqdeen maamul maxaa yeelay waligood ma sugin in la aqoonsado. Waxay la wareegeen awoodoodii.
Si qaldan ha u fasiran taas sidii ay u qaateen aniga iga. Maya, waxay ka qaateen warshadaha. Ictiraafku horta ma imaan ee wuxuu yimid kadib. Waxay ahaayeen kuwo aan laga hor istaagi karin helitaanka iftiinka. Markii ay jirtay dhacdo lagu hadlo, waxay ciyaareen kubad adag si ay u helaan boosaska ugu fiican, waxayna hubiyeen inay kor u qaadayaan… xitaa inay kor u qaadaan ku lug lahaantooda. Markii uu jiray dood kooxeed, iyaga ayaa xukumayay. Markay arkeen fursad abaalmarin, way soo gudbiyeen. Markii ay u baahdeen markhaati, way weydiisteen.
Awoodda ayaa la qaadaa, lama siinayo. Kaliya aqoonsi ayaa la siiyaa. Haddii ay jirto hal shay oo laga baran karo ololihii Trump iyo Sanders, waa tan. Ma jiro qof ka tirsan warbaahinta guud ama hay'ad siyaasadeed oo waligood dooneysay in labadan musharax ay ku tartamaan. Musharrixiinta ma danayn - waxay la wareegeen awoodda. Markaana, dadweynuhu way ku aqoonsadeen taas.
Saaxiibkey ayaa dhowaan si cad u dhaleeceeyey Gary Vaynerchuk si cad. Ma aheyn mid wax dhisa, kaliya wuxuu neceb yahay qaabkiisa iyo fariinta Gary. Isaga tan iyo markii uu qabtay jagada, laakiin waxaan kaliya ku daray hal faallooyin: Gary Vaynerchuk dan kama lihi waxaad u maleyneyso. Gary ma sugayo in la aqoonsado hogaamiyahan warshad, Gary ayaa qaatay. Iyo ballaadhinta awoodiisa iyo shirkadiisu waxay daliil u yihiin in maamulkaasi mudan yahay.
Marka waa tan talo aan jeclaan lahaa inaan siiyo dad karti iyo jahwareerba leh:
Noqo mid danaysi leh - Uma jeedo inaan wax ka qaato dadka kale sidoo kale uma jeedo inaan joojiyo caawinta dadka kale. Waa inaad haysataa rikoodh raadraac oo layaableh oo lagu dhisi karo awooddaada. Laakiin waa inaad waqti ka qaadatid shaqadaada, oo aad dhibic uga dhigtaa inaad naftaada u shaqeyso. Ka fikir maamulkaaga mustaqbalka xisaab hawlgab. Kama fariisan kartid inaad maanta allabaryo mooyee. Isku mid maamulkaaga. Ma dhisi doontid awood illaa aad maanta maal iyo juhdi geliso mooyee. Haddii aad ka shaqeyneyso 100% waqtiga loo shaqeeyahaaga ama macaamiishaada, waxba naftaada kuma maalgelinaysid. Ha ka sugin aqoonsi. Ku dadaal shaqada hadalkaaga soo socda… xitaa haddii aadan wali lahayn dhagaystayaal. Buug qor. Tag bilow boodhadh. Tag iskaa wax u qabso si aad uga mid noqoto guddiga. Tag hub culus dhacdo si aad u hadasho. Hadda.
Noqo mid geesinimo leh - Wadahadalku waa adag yahay, barashadiisu waa muhiim. Waxaan isticmaalaa bayaan qeexan oo ay igu taageerto khibradeyda. Waan ogahay waxa aan sameynayo waana sheegayaa sidaas. Had iyo jeer waan amraa shirarka (maahan kaliya inaan necbahay iyaga) maxaa yeelay ma isticmaalo ereyada sida waxaa laga yaabaa in, waxaan qabaa, waan awoodnay, iwm ereyada ma gaabiyo, ma raali galiyo, kamana laabto marka la i xifaaltamo. Haddii qof i tartamo, jawaabtaydu way fududahay. Aynu tijaabino. Taasi maaha sababta oo ah waxaan u maleynayaa inaan ogahay wax walba, waa sababta oo ah waxaan ku kalsoonahay khibradeyda.
Daacad noqo - Uma maleynayo waxa aanan aqoon. Haddii laygu xujeeyo ama la i waydiiyo ra'yigayga wax aanan hubin, sheekada waan dib u dhigaa ilaa aan baaritaan ka sameeyo. Waxaad ka dhawaajineysaa erayo badan oo awood leh, oo aan ku idhaahdo, bal aan cilmi baaris ku sameeyo taas, anigu garan maayo. ama "Waxaan leeyahay saaxiibkey oo ku takhasusay arintaas, aan iska hubiyo iyada." Intii aad isku deyi lahayd inaad ku jahawareerto jidkaaga adoo ka jawaabaya meesha aad isku daydo inaad si caqli leh ugu dhawaqdo Cidna kama kaftameysid markii aad sameyneyso. Haddii aad khaldan tahay, isla taas… qira oo horay u sii soco.
Ka duwanaan - Qof walba is kala duwan Isku day inaad la qabsato waxay gabi ahaanba kaa dhigeysaa inaad la jaanqaadi karto. Waxaa lagaa dhex qarin doonaa qof kasta oo kale oo aan lahayn awood iyo aqoonsi hareerahaaga ah. Maxaa adiga kaaga duwan? Ma muuqaalkaaga? Kaftankaaga? Khibradaada? Wax kastoo ay tahayba, qaado heer aad u fiican sida aad dadka kale ugu muujiso. Ma dheereyn, waan cayilay, cirro ayaan ahay… haddana dadku waa i dhageystaan.
Feejignow - Fursado ayaa kugu xeeran. Waa inaad si joogto ah uga feejignaato iyaga. Waxaan ka jawaabaa ku dhowaad codsi kasta oo si toos ah la iigu soo diro si aan ugu jiro Podcast ama aan u siiyo tixraac maqaal warshadeed. Waxaan raadsadaa fursado adeegyada codsiyada saxaafadda. Waxaan soo gudbiyaa faallooyin maqaallo adag oo aanan ku raacsaneyn ama aan ku siinayo midab dheeri ah marka maqaallada aan dhameystirnayn.
Noqo mid aan cabsi lahayn - Awood dowladnimo macnaheedu maahan in qof walba ku jeclaaday. Xaqiiqdii, adoo iska dhigaya dadka kale hortiisa waxaad gabi ahaanba bartilmaameed u noqon doontaa kuwa khilaafsan. Haddii aan dhagaysto qof kasta oo igu khilaafsan noloshayda oo dhan, meelna kama helin. Haddii aan isku dayo in qof walbo i jeclaado, waxaa la i geyn lahaa qeybta dhimirka. Had iyo jeer waxaan la wadaagaa sheekada hooyaday. Markii aan bilaabay ganacsigeyga, hadalkeedii ugu horreeyay wuxuu ahaa, "Oh Doug, sideed ku heli doontaa caymiska caafimaadka?" Mararka qaarkood xitaa waa inaad cadeysaa kuwa aad jeceshahay qaladka.
Ugu dambeyntiina, fure u ah maamulka ayaa ah inaad ku jirtid hagidda mustaqbalkaaga, oo aadan u baahnayn qof kale. Xaqiiqdii waad u qalantaa awooda aad aaminsantahay inaad haysato… laakiin fadhiisan kartid oo sugi kartid inay dadka kale ku aqoonsadaan ilaa aad ka qaadatid. Markaad maal gashato, waa laguu aqoonsan doonaa. Oo markii dadka kale ku aqoonsadaan - xitaa lagu dhaleeceeyo - waxaad ku socotaa jidkaaga.
Waxaan kaqeybgalay bandhig kaqurux badan Ellen Dunnigan (shirkadeeda, Lahjadda Ganacsiga, ayaa fiidiyowga ku duubtay qoraalkan) waxayna siisay talooyin taxane ah oo ku saabsan awoodda dhismaha. Waxay u baahan tahay inaad labadiinaba noqotaan kuwo ula kac ah oo ujeedo u leh qaabkiina kasta fursad amar amar. Waxaan kugula talin lahaa inaad raacdo shirkadda Ellen ee warbaahinta bulshada iyo Youtube, waxaad baran doontaa tan! Kireyso shirkadeeda adiguna waa lagaa badali doonaa
Tags: heeganxujogeesimaamulka dhismahakala duwanaanshoDonald Trumpgary vaynerchukgary veedaacadoo hadlaya dadweynahahadlayaybuunka
Ka faa'iideysiga Hubinta Bulshada ee Falanqaynta Tafaariiqda Saadaasha ah
Sidee Xayeysiintu u shaqeysaa